မိန်းမ ၂၅ ယောက်ကလိင်အကြောင်းသိသင့်တာ ၂၅ ခု - သတင်း
မိန်းမ ၂၅ ယောက်ကလိင်အကြောင်းသိသင့်တာ ၂၅ ခု
အသက် ၂၅ နှစ်မှာမင်းဟာဘဝမှာကြီးမားတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်အချို့ကိုရောက်သင့်ပြီလို့ခံစားရသည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကိုရယူခြင်း၊ ဖုန်းငွေပေးချေခြင်း၊ ထွက်ခွာခြင်းနှင့်သင်၏ payslip ရှိအခွန်ကုဒ်ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနားလည်ခြင်းကဲ့သို့ပင်။ သင်၏မိတ်ဆွေစစ်များမည်မျှသောက်မည်၊ မည်မျှသောက်မည်ဆိုလျှင်အရက်နာကျခြင်းနှင့်အမျိုးအစားများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် ယောက်ျားများသင် Tinder အပေါ်ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ် အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာ။
ဒါပေမယ့်အသက် ၂၅ နှစ်မှာဖြစ်မဖြစ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမကောင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာမင်းကမင်းကိုဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်မယ်၊ အနည်းဆုံးလိင်အရုပ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသင်သိချင်တယ်။ မိန်းကလေးများအားလုံး ၂၅ နှစ်မှာလိင်အကြောင်းသိသင့်တဲ့အချက် (၂၅) ခု -
သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုစတင်သောအခါအဓိကဖြစ်ရပ်သည်လာမည့်လူ၊ သူနှင့်နီးကပ်စွာလာပြီးအခြေခံအားဖြင့်သူ၌ကောင်းမွန်သောအချိန်ရှိခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည် - သို့သော်ထိုသို့မဖြစ်သင့်ပါ။ လိင်သည်သင်နှစ် ဦး စလုံးအားရကျေနပ်မှုရရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်အောင်သင်အချိန်ကိုထည့်သွင်းမထားသူတစ် ဦး အားရှုပ်ထွေးနေပါကသူ့ကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
၂။ လိင်သည် Pornnos ၌မည်သို့မည်ပုံရှိသနည်း။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်မခံစားမိပါက၎င်းသည် FAKING ကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်အသံကျယ်သောအသံဆူညံသံကိုပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။
အိုဟိုင်းကလေးများ၊ ပို၍ ခက်ခဲသည်၊ ပို၍ ခက်ခဲသည်၊ Nevada သဲကန္တာရတွင်အသက် ၄၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး လုပ်နေသည့်အတွက်သင်ဤအရာကိုလုပ်သင့်သည်ဟုခံစားရရန်မလိုအပ်ပါ။ ယောက်ျားများသည်၎င်းမှတစ်ဆင့်ကြည့်သည်၊ ဆူညံသံများသည်မမှန်၊ မင်း ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုငါသိ၏။ သင်အမှန်တကယ်ခံစားရသည့်အခါ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာသည်သူနှစ်သက်သည်ကို၎င်းသိပြီးဖြစ်သည်။
၃။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ORGASMAM တစ်ခုကိုတခါတရံမှာမှားယွင်းစွာလုပ်မိဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ
အမြဲတမ်းအော်ဂဇင်အတုရှိခြင်းအကျင့်ကိုဘယ်တော့မှမထားပါနှင့်။ သင်အမှန်တကယ်အော်ဂဇင်တစ်ခုရှိနေသည့်အချိန်တွင်ထိုကောင်လေးသည်သင့်အားထိုနေရာတွင်ရောက်စေရန်သူပြုလုပ်ခဲ့ရာကိုမသိပါ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အနည်းငယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီးအော်ဂဇင်အတုရှိခြင်းသည်၎င်းသည်မကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်ကိုဆိုလိုသည်။
သူမသည်ကအတု probs ပါပဲ
သင်ငြီးငွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လက်ချောင်း ။ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုသိလဲ၊ ဘာခံစားရလဲ၊ ဘာမဟုတ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ အချို့မိန်းကလေးများသည်ကစားစရာများ၊ အရုပ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားစိတ်နေစိတ်ထားရအောင်ကူညီသည်။
ဗွီဒီယိုကို vhs နဲ့ဘယ်လိုတူအောင်လုပ်ရမလဲ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကလိင်ကိုနှစ်သက်တာဟာ slutty လို့ထင်တာကြာပြီ။ မိန်းကလေးတစ် ဦး ကလူ 20 ယောက်နှင့်အိပ်ခဲ့လျှင်သူမစုဆောင်းပြီး 'ရည်းစားမဟုတ်သောပစ္စည်း' ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယောက်ျားတစ်ယောက်တွင်သူသည်ဒဏ္legာရီနှင့်ယောက်ျားလေးများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မှား - ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူ ၁၀၀ နှင့်အတူအိပ်ခြင်းမှဖြစ်စေလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်နိုင်သည်။
၆။ နံနက်ခင်းလိင်ကိစ္စသည်အလွန် sexy ဖြစ်နေသောကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာမရှိဟုမခံစားရပါစေနှင့်။
သူ၏ဒစ်သည်နံနက်အချိန်၌အမြဲတမ်းခဲယဉ်းနေလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဟုမဆိုလိုပါ။
သင်တစ် ဦး တည်းအချိန်လိုတဲ့အခါသင်အဘို့ကြီးသောကြောင့်မသာ, လိင်စဉ်အတွင်းသင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်ပျော်စရာပါပဲ။ သင်ပြီးတာနဲ့ တုန်ခါမှုတစ်ခုဝယ်ပါ မင်းမရပ်နိုင်ဘူး
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်လိင်ဆက်ဆံမှုဖြင့်သာအသက်ရှည်နိုင်သည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကဒါကိုလုပ်နိုင်တယ် အဘယ်သူမျှမ clitoral ဆွထံမှ, ဒါကြောင့်သင်အဲဒီမှာရတဲ့မဟုတ်ပါဘူးလျှင်သင်ပုံမှန်မဟုတ်သောနေစဉ်းစားထွက်မထင်မှတ်ကြဘူး။ သို့သော်ကရာဟာအမြဲတမ်းသင့်ကိုနင်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးသင့်တယ် - ဒါကြောင့်ဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ အမြဲတမ်းသေးငယ်တဲ့မြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ် 'up and down' လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပထမ ဦး ဆုံးနှေးနှေးသွား, ထို့နောက်သင်ကသို့ရောက်ပြီတခါမြန်နှုန်းနှင့်ဖိအားကိုတည်ဆောက်။
၉ ။ စောင့်ကြည့်နေတဲ့မကောင်းဘူး
၁၀။ အကယ်၍ သင်သည် SEN MENU FUCKBOY နှင့်အိပ်ပျော်နေလျှင်၊
သတ်မှတ်မီနူး fuckboy သည်အိပ်ရာပေါ်၌တူညီသောအရာများကိုပြုလုပ်သည့်ကောင်လေးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောကြောင့်သူတို့ကျိန်ဆိုသည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိသည်၊ သို့သော်သင့်အားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုပေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကမင်းကိုငါးမိနစ်လောက်နမ်းပါလိမ့်မယ်၊ နှစ်ယောက်အတွက်လက်ချောင်းသုံးချောင်းကျသွားလိမ့်မယ် လျှာ ) ထို့နောက်သင်အော်ဂဇင်မရောက်မီလမ်းမကြွလာမှီအတူတူနှစ်ခုရာထူးအတွက် shags ။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားလေးများတ ဦး တည်းအစီအစဉ်ရှိသည်, ထိုသို့သငျသညျလာအောင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရ!
ဤသည်ကောင်လေး probs တစ် ဦး set ကို menu ကို fuckboy ဖြစ်ပါတယ်
၁၁။ သင်၏ VAG ပေါ်၌သင်မည်မျှဆံပင်ဖြည့်ထားသနည်း
သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ဆံပင်ဘယ်လောက်အရေးမကြီးကြောင်းသင်သတိပြုမိသည်။ အလေးအနက်စဉ်းစားသည့်နည်းတူသင်တစ်လလျှင်ပေါင် ၃၀ ကိုပူပြင်းဖယောင်းကိုသင်၏လိင်အင်္ဂါ၌သွန်းလောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်ထက် ၁၀ မိနစ်စော။ နိုးထစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်သင်တစ် ဦး သည် shit သင်တုန်းဖြင့်သင်၏ vag တွင်ထိုးဖောက်နိုင်သနည်း။ အဖြေကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး၎င်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါကပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ယောက်ျားကောင်းတွေဟာတစ်ခုခုကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးဖို့ရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိစေနှင့် မင်းကိုဘယ်လိုလက်ချောင်း သူသည်သင်တို့ကိုအခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုထွက်လျက်နှင့်သောအခါအဘယ်သို့ပြုရမည် မင်းကိုဘယ်လိုလာရအောင် သူတို့သိချင်ကြတယ် ကောင်မလေးဘာဖြစ်နေတာလဲ သငျသညျလာစေရန် - သူတို့သည်သင်၏ယောနိလုံးဝ clueless န်းကျင်လျက်လျက်လျက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး။
အကောင်းဆုံးအော်ဂဇင်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ မင်းထိပ်မှာရှိနေတယ် , သူ့ကိုသူ့ကိုစီးပေါ်မှာမိမိအပြားကိုတင်သူ့ကိုယူ, သူ့ကိုသင်စီးနင်းသည့်အခါသင်၏ clit ကဆန့်ကျင်ပွတ်။ ဇွန်းချတဲ့အခါသူ့ကိုပတ်ပတ်လည်ရောက်အောင်လုပ်ပါ၊ ယောက်ျားများသည်သင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကသင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။ Plus အားကပူပါတယ်။
တနည်းကား, အစစ်အမှန်ဘဝတစ် ဦး porno မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်သည့်အခါသည့်အခါကဲ့ရဲ့ပျော်စရာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါသည် blowjob ပေးခြင်း ။ မင်းရဲ့ထိပ်တစ်ဝက်ကိုစို့နေတုန်းသူ့ Dick ရဲ့အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကို handjob တစ်ခုပေးသလိုပဲ - t လိင်တံ၏ထိပ်တွင်အာရုံကြောအများဆုံးရှိသည် ဒါဆိုဒါကသင်တချိန်လုံးတိတ်တိတ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်။
ဒီနောက်ကွယ်မှာဘာ voodoo ဒါမှမဟုတ်သိပ္ပံရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိပါ။
(၁၆) အချိန်ကာလလိင်သည်လုံးဝသဘာဝပင် မဟုတ်ဘူး တချို့မိုက်မဲ Tabo
သိသာထင်ရှားတဲ့သင်ကလုပ်လိုလျှင်သင်မှတက်ပေမယ်ရှိခြင်း သင့်ရဲ့ကာလအပေါ်လိင် သင်ဤသည်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ထင်သည်ဟုထင်သောဤစုစုပေါင်းအရာအဖြစ်မရှုမြင်သင့်ပါ။ ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအရည်ကဲ့သို့သောသွေးထွက်ခြင်းသည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျထိုနေ့တစ် ဦး အလတ်စားစီးဆင်းမှုရရှိပါသည်လျှင် Plus အားကသင်၏စာရွက်များသို့မဟုတ်သူ၏ဒစ်တစ်ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်တူသွားကြသည်ကိုမကြိုက်ပါကသွေးအများဆုံးပမာဏအနည်းငယ်ဖြစ်ကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံး BJ ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲ
သင်နာနေလျှင်၎င်းကိုကပ်လိုက်ရုံနှင့်အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းစွာခံစားရသည်ဟုမခံစားရပါစေနှင့်။ တစ်နာရီသို့မဟုတ် ၂၀ မိနစ်ခန့်သာရပ်နားရန်သို့မဟုတ်လုံးဝရပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ အဆိုပါကောင်လေးရဲ့အော်ဂဇင်ကိုသင်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး, သူသည်သူတကယ်အပူတပြင်းဖြစ်လျှင်သူသည်ရေချိုးခန်းအတွင်း wank သွားနိုင်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်anice သက်သာသက်သာ cuppa သို့မဟုတ်စပျစ်ရည်ကိုတစ်ခွက်စေနိုင်သည်။
၁၈။ ဘယ်သောအခါမှသင်တို့မလာနိုင်တော့၊ ၎င်းသည်သင့်အားအဓိပ္ပာယ်မရှိ၊ သို့မဟုတ်သူသည်အိပ်ရာပေါ်တွင်ရှိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပါတယ် အရမ်းသောက်တယ် , မူးယစ်ဆေးဝါးအချို့ယူ သို့မဟုတ်သင်တို့ထဲကတစ်ခုခုကို overthinking နေကြသည်။ ဘယ်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာသေချာပေါက်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုများအတွက်မိနစ် 40 အဘို့အတက်ကြွ hump ထက်ရပ်တန့်ဖို့သာ။ ကောင်း၏။ သူကမဟုတ်ရင်ကျိန်းသေမဟုတ်သောအရာမဟုတ်ရင်ပျက်ကွက်ရဲ့တူသောသူခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကောင်းရဲ့သူ့ကိုစိတ်ချပါ။
19. FOREPLAY နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကျော်ဖြတ်ပါ
ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းသည်အမြဲတမ်းတည်ဆောက်နေစဉ်တွင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့, ထို့နောက်အနားယူရှိသည်နှင့်သူ၏မျက်နှာပေါ်မှာထိုင်။ ဒါဟာလက်ချောင်း, ထွက်အစာစားခြင်း, handjob, ထိုးနှက်အလုပ်ဇာတ်စင်မှသာထိုးခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
၂၁ ။ အမြဲတမ်း လိင်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရှိတယ်
သင် UTI ကိုတကယ်လိုချင်သည်မဟုတ်ပါကအလွန်မသက်မသာဖြစ်သောရောဂါပိုးကူးစက်စေနိုင်သည့်စုစုပေါင်းဗက်တီးရီးယားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သင်လုပ်ပြီးသောနောက်တွင် loo သို့သွားပါ။ အဆစ် သင့်ကိုကြည့်နေတယ်
၂၂။ သူ့ရဲ့ PENIS နဲ့အဆင်ပြေပါ။ သင်ဟာ Rocket ကိုစတင်ဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ပါဘူး
ထိုနည်းတူစွာသင်သူ့ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စေလိုသည်၊ ကြိုးမဆွဲပါနှင့်သို့မဟုတ်မစုပ်ပါနှင့် - မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပွတ်တိုက်အားပေးပြီး၎င်းသည် sexy မဟုတ်ပါ။
တချို့လူတွေက BDSM ထဲကို ၀ င်လာတယ် လကျအောကျခံဖြစ်ခြင်း, သို့မဟုတ်တက် dressing, ထိုသို့လုံးဝဒဏ်ငွေပါပဲ။ ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး beastiality တူတစ်ခုခုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လျှင်ဒါဟာလူတွေရဲ့ kinks ထွက်ကြိုးစားနေပျော်စရာနိုင်ပါတယ်။
၂၄။ အကယ်၍ သူ၏ Dick အနံ့အရသာရှိပါကမစ်ရှင်ကို အကြောင်းပြု၍
အလေးအနက်ထားအနေဖြင့်၊ သင်၏နှာခေါင်းသည်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သောသူငယ်အတွက်သာမဟုတ်ပါ၊ တစ်စုံတစ်ခုသည်အနံ့ဆိုးရွားလျှင်၊ ယောနိတွင်ရှိသောဗက်တီးရီးယားများသည် UTI နှင့်ညီသည်။
၂၅။ ယောက်ျားတွေမှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ANALING လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်
ဒါကယောက်ျားခရိုမိုဆုန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်တယ် ယောက်ျားတွေကစအိုနဲ့ကောင်လေးအတွက်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲ နှင့် 'ကစမ်းကြိုးစား' 'လိုသော။ သငျသညျ lube များများနှင့်တင်းပါး plug ကိုတကယ်လိုချင်ခြင်းနှင့်ရှိပါကသာလုပ်ပါ။ သူကအဲဒါကိုထဲထဲဝင်ရင်သင်တောင်လုပ်နိုင်တယ် မိမိအ Bum အတွက်ပါးလက်ချောင်းချော် လိင်ဆက်ဆံစဉ်က၎င်းသည်သူတို့အတွက်အလွန်အထိခိုက်မခံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁) စိတ်ပျက်စရာဖြောင့်မိန်းကလေးများအားဖြင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုထုတ်စားရန်မည်သို့မည်ပုံ